विदेशबाट घर आउने नेपालि लाइ सुन त’स्करले यसारी फसाउन सक्छन !! होसियार ! - Sacho Post
२०७८ मंसिर १४, मंगलवार ०२:४२ बजे
उनले यति भन्ने बित्तिकै मैले कुरोको चुरो बुझिहालेँ । आजभोलि सुन त’स्करको बिगबिगी छ नै । उनले बोलेको वाक्यको अर्थ यही थियो । सुनको बाला बनाएर भरिया बनाई नेपालमा सुन त’स्कर गर्ने । मैले उनको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेँ । यस्तो गै’रका’नुनी ध’न्दामा मलाई फस्नु थिएन । म सरासर विमानस्थलभित्र प्रवेश गरेँ । विमानस्थलमा देखिने ठगीका अनेक रङ्गहरुसँग जोगिन म सबैलाई आग्रह गर्दछु । कसैलाई सहयोग गरेँ सोचिरहँदा का’रागार पुगिएला, सचेत रहौँ ।
मानिसहरू लाइनमा उभिएर आफ्नो पालोको पर्खाइमा थिए भने का’उन्टरमा अनावस्यक बहस गरी समय बर्बाद गरिरहेका थिए । जति बहस गरे पनि आफ्नो लगेज त्यहाँ तोके भन्दा बढी लिन बिल काट्नु नै पर्ने हुन्छ । त्यो भन्दा अर्को विकल्प छैन नै । यो त लगेज काउण्टरको कुरो थियो । हाते ब्याग चेक गर्ने ठाउँमा त झन ठूलो अन्तर देख्न पाइन्थ्यो । स्पष्ट रूपमा सात किलो लेखिएको थियो र पनि दश किलोसम्म छुट दिएको देखियो । अब त्योभन्दा पनि बढी समान जबर्जस्ती ल्याउँदा दोष कसको ? सामान ल्याउनेको की ? जाँच गर्न बस्नेको ? त्यसैले नियमलाई पालना गरौं ताकि पछुताउनु नपरोस् । हुन त चाडपर्वको बेला हो । घरपरिवार इष्टमित्र सबैलाई सम्झदा सम्झदै सामानको भारी ठूलो भएको पत्तै हुँदैन । तर पनि हामीले यी सबै कुरालाई मिलाएर व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सबै जाँच सकेपछि मलगायत अरु यात्रुहरु जहाज भएतर्फ लाग्यौँ । जहाजमा चढ्यौँ । यो समयमा घर जान कठिन छ भन्ने बाहिर जस्तो हल्ला थियो, त्यहाँ पुगेपछि मलाई त्यस्तो लागेन । केही बेरमै जहाजले भुइँ छोड्यो । नारायण कोइराला उज्यालो